Wasiirka Cadaalada Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in wasaaradiisu ay diyaarisay sharciyo lagu taageerayo garsoorka dalka sida hubinta howlaha socda, diyaarinta xeerarka, fulinta, miisaaniyada iyo tababarada xubnaha garsoorka.
Intii uu xafiiska joogay, ayuu yiri, Golaha Wakiillada wuxuu meel mariyey Xeerka Nootaayooyinka ugu dambeyntiina waa la helay cod, isagoo ku tilmaamay ujeeddada qabyo-qoraalka ah inay kordheen cabashooyinka dadka ee dokumentiyada been abuurka ah sida uu hadalka u dhigay.
Wasiir Cabdulqaadir wuxuu xusay in howsha la dagaalanka cadaalad darada, lasocodka sharciga ladagaalanka musuqmaasuqa iyo diyaarinta shuruucda kale ee qabyada ah ay wali kujiraan hay’ado karti iyo xafiisyo leh sida Golaha Wasiirada & BFS.
“Dalku wuxuu ubaahan yahay sharciyo kaladuwan. Waxaan diyaarinayay sharci aad loogu baahnaa oo ku saabsan xeer ilaalinta oo aan u geeyo Golaha Wasiirada. Dhawaan waxaan soo gudbin doonaa sharci dhalinyarada u muhiim ah oo muhiim u ah caruurta Soomaaliyeed, dib u habeynta guud. cadaalada sida dhismaha xabsiyada, tababarka garsoorayaasha & xeer ilaaliyeyaashu way socdaan ” Sidaasi waxaa yiri wasiirka cadaalada XFS.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shirkii sanadlaha ahaa ee Wasaaradda Cadaaladda looga tacsiyeeyay Soomaaliya, saraakiisha iyo ka qeyb galka howlaha kala duwan ee Garsoorka ee u qalma in ay soo bandhigaan aragtidooda iyo waxa ay ciyaarta ku soo kordhiyaan